ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Archives - Page 8 of 10 - Pissaya News
ဆီးချိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းက ဆေးသောက်ရမယ် လိုအပ်ရင် အင်ဆူလင် ထိုးရမယ်လို့ပဲ နားလည်ကြပါတယ်။ ဆီးချိုဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီး တာနဲ့ ဆေးသောက်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ အစားအသောက်အနေအထိုင်ပါ ပြုပြင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးသူရှားပါတယ်။ 1. ပထမဆုံးအနေနဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ ဆီးချိုဖောက်စက်ဝယ်ပါ။ ဆီးချိုဖောက်စက်လေးကို မဖြစ်မနေ၀ယ်ပါ။ လိုအပ်မယ်ထင်တိုင်း ဓာတ်ခွဲခန်းပြေးဖောက်ဖို့ မလွယ်လို့ပါ။ ည ဆယ်နာရီနောက်ပိုင်း အစာ မစားပဲ မနက် ၆ နာရီ ဖောက်စစ်ပါ။ စစ်တဲ့ အဖြေတွေကို ရက်နဲ့ အချိန်နဲ့ ချရေးပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်မှာမှတ်ပါ။ စာအုပ်က အဖြေလေးတွေကို ဆရာဝန်ကိုပြပါ။ ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဆီးချို အတက်အကျ ပုံစံကိုသိရလွယ်စေပါတယ်။ 2. ဆီးချိုရှိမှန်းသိတာနဲ့ ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကုပါ။ ဟိုပြေး ဒီပြောင်း မလုပ်ပါနဲ့ ။ လိုအပ်လို လွှဲပြီဆိုမှ သူလွှဲအပ်တဲ့ ဆရာဝန်ဆီကို ဆက်ပြပါ။ 3. ဆေးတွေကိုသောက်ရမယ့်အချိန် အစာနဲ့ တွဲတာ ခွာတာ သေချာမေးပါ။ လိုအပ်ရင် ခုနကစာအုပ်လေးမှာ ရေးမှတ်ထားပါ။ 4. ဆေးလုံးထည့်သောက်တဲ့ဘူးလေးတွေရှိပါတယ်။ ၀ယ်ပြီးဆရာဝန်သို့ ဆရာမအစီအစဉ်နဲ့စီစဉ်ပြီးထည့်ထားပါ။ ဆေးလုံးဘူးကို အေးမြခြောက်သွေ့ တဲ့နေရာမှာ သိမ်းပါ။ 5. ဆီးချိုအတွက် အစားအစာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ စာရွက်လေးနဲ့ ပေးပါလိမ့်မယ်။ မရရင် တောင်းပါ။ ပျောက်သွားရင် ထပ်တောင်းပါ။ မိတ္တူဆွဲပြီ3းနေရာမှာကပ်ပါ။ အိပ်ခန်းနံရံ၊ မီးဖိုချောင် နံရံ…
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ဆီကိုသရုပ်ဆောင် အိစိကွေးက သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့(ဇွန်လ၁၂ရက်)မှာ ကစ်ကစ်အတွက် ကစ်ကစ်စားချင်တာလေးတွေကို အိမ်ကနေ ချက်ထည့်သွားပြီးတော့ ဆေးဖိုးလေးလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကစ်ကစ်ဆီ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကိုလည်း အိစိကွေးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယခုလို ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ “အန်တီ ကစ် စားချင်တာလေးကို အိမ်ကနေချက်သွားတယ် ဆေးဖိုးလေးလှူခဲ့တယ်။ တွေ့လိုက်တာနဲ့ အတည်ပေါက်တွေနောက်တယ်။ အားပေး စကားတွေပြောခဲ့တယ်။ အရင်တိုင်းပဲ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာပြောင်လို့ကောင်းတုန်း” ဆိုပြီး ဒီနေ့(ဇွန်လ၁၂ရက်)က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် မှာ ရေးသားထားတာပါ။ အိစိကွေးရဲ့ အလှူကိုလည်း ပရိသတ်တွေက သာဓုခေါ်ဆိုကြပြီးတော့ ချီးကျူးထားကြပါသေးတယ်။ ဆီးချိုကြောင့် မျက်လုံးနှစ် လုံး စလုံးဟာ ကွယ်နေသလို ကျောက်ကပ်ကလည်း လုံးဝမကောင်းတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ကစ်ကစ်ဟာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိပါတယ်။ အသက် ၄ နှစ်ခွဲအရွယ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်အလုပ် လုပ်လာတဲ့ အိစိကွေးကိုတော့ အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေက အရမ်းကိုချစ်ခင် အားပေး လျှက်ရှိကြပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အခုအရွယ်မှာ မော်ဒယ်လ်မင်းသားတွေလို အရပ်အမောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေ မရှိပေမယ့် အိစိကွေး ကိုအားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်းကိုသာ အားပေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ခံစားနေရရုံသာမက ကျောက်ကပ်ကပါ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိစိကွေးရဲ့…
အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတစွာကျွေးဖို့လိုသလို သူတို့စားချင်တာလေးတွေကိုလည်း ပစ်ပစ်ခါခါမလုပ်ဘဲနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ စားချင်တာလေးတွေလည်းစားနိုင်ဖို့ အာဟာရလည်ပြည့်စုံစေဖို့အတွက် အသုံးဝင်မယ့်အချက်လေးတွေ ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လုံးဝမစားရဘူးလို့ ကန့်သတ်မထားပါနဲ့။ ကလေးတွေကို သကြားလုံးလုံးဝမစားရ၊ အချိုပါတဲ့ကလေးကြိုက်မုန့်တွေကို အမြဲပဲရှောင်ခိုင်းနေမယ်ဆိုရင် ကလေးက စိတ်ဆိုးပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်လာပါလိမ့် မယ်။ ကလေးကို သဘာဝကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အချိုတွေကျွေးလို့ရပါတယ်။ ကလေးကိုဒီဟာကိုလုံးဝမစားရဘူးလို့မပြောဘဲနဲ့ ချိုပြီးကလေးလည်းကြိုက်မယ့် မုန့်မျိုးတွေကို ကျွေးပါ။ အများကြီးမစားမိစေဖို့ သတိပြုပါ။ သကြားပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကို အလွန်အကျွံမစားမိစေဖို့ သကြားလုံးစားမယ်ဆိုရင်လည်း အကြီးကြီးမကျွေးပဲနဲ့ သေးသေးလေးတွေပဲကျွေးပြီး အများကြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ပါ။ အချိုနဲ့ သစ်သီးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို မျှတအောင်ကျွေးပါ။ အချိုနဲ့သကြားလုံးတွေအစားများတဲ့အခါမှာဆိုရင် သစ်သီးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေများများထပ်ကျွေးပေးပါ။ ညနေဘက် မိသားစုတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ အချိုေ တွအများကြီးစားတော့မယ်ဆိုရင် မနက်စာနဲ့နေ့လည်စာတွေမှာ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးတွေ၊ အစေ့အဆန်တွေနဲ့ အုတ်ဂျုံစတဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ညီညွတ်တာတွေအများကြီးပြင်ဆင်ကျွေးတာမျိုးလုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများများရှိပါစေ။ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပါစေ။ ပါတီတွေမှာစားဖို့ (သို့) အကြောင်းတစ်ခုခုအတွက် သကြားလုံးတွေဝယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုသေချာဖတ်ပြီး အော်ဂန်းနစ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုးဆေးမပါ၊ သကြားအစစ်နဲ့လုပ်ထားသော၊ ဓာတ်မတည့်မှုမဖြစ်စေသော သကြားလုံးအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ Credit – Dr. Mya Myo Myo Swe (www.drmyanmar.com)
တချို့ဆေးတွေဟာ အစာနဲ့ခြားပြီး သောက်ရပေမယ့် တချို့ဆေးတွေကိုတော့ အစာနဲ့တွဲပြီး သောက်ခိုင်းတာ၊ အစာစားပြီးမှ သောက်ခိုင်းတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ – 1. ပျို့အန်ချင်စိတ် နည်းစေရန် ပျို့အန်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေတတ်တဲ Allopurinol ဂေါက်ရောဂါဆေး၊ bromocriptine နို့ခမ်းဆေးနဲ့ madoparဆိုတဲ့ ဆေးတွေကိုအစာစားပြီးမှ သောက်ခြင်းဖြင့် ပျို့အန်ချင်စိတ်ကို နည်းစေပါတယ်။ 2. အစာအိမ် ထိခိုက်မှု နည်းစေရန် တချို့ဆေးတွေဟာ အစာအိမ်ကို ထိခိုက်စေတတ်ပြီး အစာနဲ့ တွဲစားခြင်းဖြင့် မထိခိုက်စေအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ Aspirin နဲ့ NSAID အကိုက် အခဲပျောက်ဆေးတွေ၊ စတီးရွိုက်ဆေးတွေကို ပေါင်မုန့်၊ နို့ စသည်ဖြင့် အစာ တစ်ခုခုနဲ့ တွဲစားသင့်ပါတယ်။ 3. ရင်ပူခြင်း နည်းစေရန် အစာအိမ်ထဲ အစာတွေ ရောက်လာတဲ့အခါ အက်ဆစ်ဓာတ်တွေ ထွက်ပြီး ဒီအက်ဆစ်တွေ အပေါ်ကို လျှံတက်တဲ့အခါ ရင်ပူတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုရင်ပူခြင်း မဖြစ်အောင် Antacid ဆေးတွေက ကာကွယ်ပေးတာကြောင့် ဒီဆေးတွေကို အစာနဲ့တွဲပြီး သို့မဟုတ် အစာ စားပြီးချိန်တွေမှာ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ 4. ဆေးတွေ အစာနဲ့ မပါသွားစေရန် လျှာမှာ ခရုသင်း ပေါက်တာတွေ၊ မှိုစွဲတာတွေအတွက် ပေးတဲ့ ပလုတ်ကျင်းဆေးတွေ၊ မှိုသတ်ဆေးအရည်တွေကို အစာ စားပြီးမှ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အစာနဲ့ ပါမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 5.…
သားသား၊မီးမီးလေးတွေ အရပ်ပုနေမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအစားအသောက်တွေကိုသာ ပုံမှန်လေး ကျွေးမွေးပေးလိုက်ပါ။ ကလေးငယ်တွေ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် Super Food လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေက ကလေးတွေရဲ့ အရပ်ကို မြင့်မားလာစေပြီး အခြားသော ကျန်းမာရေးပြသနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ အစားအသောက် (၇) မျိုးကတော့ ကလေးငယ်တွေ အရပ်ရှည်လာစေဖို့နဲ့ သန်စွမ်းစေဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥ ပရိုတင်းဓာတ် အများအပြားပါဝင်တဲ့ ကြက်ဥဟာ ကလေးငယ်တွေကို အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကလေးတွေကို တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ကြက်ဥ (၁)လုံးတော့ ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်။ ပြုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Omelet လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်စာအဖြစ် ကျွေးသင့်ပြီး နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ်တွေကို ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ၂။ နို့ ကယ်လ်ဆီယမ်ပြည့်ဝတဲ့ နို့ကတော့ အရိုးတွေကို သန်စွမ်းကျန်းမာစေပြီး ကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ နို့မှာ ပရိုတင်းလည်း ပါဝင်နေပြီးတော့ ကလေးငယ်လေးတွေ အရပ်ရှည်လာစေဖို့အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ပဲ ပဲမှာလည်း ပရိုတင်းဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး ကြွက်သား၊ အရိုးတွေကို ပိုမိုသန်မာစေပါတယ်။ ပဲကို အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းနဲ့ ချက်ပြုတ်လို့ရပြီး ကလေးငယ်တွေ ကြီးထွားမှုအတွက် အံ့သြဖွယ်ရာ အစားအစာတစ်မျိုးအဖြစ် လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၄။ အုတ်ဂျုံမှုန့် တခြားသော…
အပူချိန် လွန်ကဲခြင်းဟာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မှ မသင့်တော်ပါဘူး။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတွေမှာ ပိုပြီးဆိုးရွားတတ်ပါတယ်။ အပူကနေ အမြန်ရှောင်ရှားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မရှောင်နိုင်ခဲ့ရင် အပူလွန်ကဲပြီး ကယောင်ကတမ်းဖြစ်တာ၊ သတိမူးမေ့ တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးမှာ ဖိအား များလာပြီး နှလုံး မခံနိုင်တဲ့အခါ နှလုံးခုန် ရပ်သွားတတ်ပါတယ်။ အချိန် အတော်ကြာ အပူချိန် လွန်ကဲလာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို စုပေါင်းပြီး အပူလွန်ကဲရောဂါများ Hyperthermia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ 1. အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် မူးဝေခြင်း အပူထဲ အချိန်ကြာ လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါ ရုတ်တရက် မူးဝေလာတတ်ပါတယ်။ Beta Blocker လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးဆေး သောက်ထားသူတွေနဲ့ အပူဒဏ်ကို မခံနိုင်သူတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အေးမြတဲ့နေရာမှာ နားနေပြီး ခြေထောက်ကို မြှောက်တင်ထားပါ။ မူးဝေမှုကို သက်သာစေဖို့အ တွက် ရေ များများ သောက်ပါ။ 2. အပူကြောင့် ကြွက်တက်ခြင်း နွေပူပူမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်တဲ့အခါ ဗိုက်ကြွက်သားတွေ၊ လက်နဲ့ခြေထောက် ကြွက်သားတွေ ကြွက်တက်ပြီး နာကျင်လာတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေပေမယ့် အရေပြားကတော့ စိုစွတ်ပြီး အေးနေတတ်ပါတယ်။ အေးတဲ့နေရာမှာ ခဏနားနေသင့်ပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ အရက်မပါတဲ့ အရည်များများ သောက်ပေးပါ။ 3. အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်…
ပူလောင်နေရာကနေ ရုတ်တရက် အေးသွားခြင်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းပါဘူး။ အရမ်းပူနေရာကနေ ရုတ်တရက် အရမ်းအေးသွားခြင်းက အအေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားသောရုံး၊ အဆောက်အဦးနှင့် ဆေးရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်သူမှာဆိုရင် အရမ်းကိုပူတဲ့ အပြင် ဘက် ကနေပြီး လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ အတွင်းနဲ့အပြင်ရဲ့အပူချိန် ရုတ်တရက် ကွာခြားမှုက ခန္ခာကိုယ်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ အသားအရေ၊ အချွဲအမြှေးပါးနဲ့ မျက်လုံးတွေကို ခြောက်သွေ့သွားစေပါတယ်။ ဒီအပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုက မျက်လုံးနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ကြွက်တက်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေအေးပေးစက်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ထခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ တုပ်ကွေး၊ အစာပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ထိပ်ကပ်နာ၊ အအေးမိခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ကြွက်သားများ ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကဲ့သို့သော ရောဂါတွေကို ဆေးရုံတွေမှာ အမြဲတွေ့နေရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သမမျှတပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ဖို့အတွက် ထောက်ခံချက်ပေးတဲ့ အပူချိန်ကတော့ 23°C နှင့် 25°C ကြား ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းက နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါနှင့် ခြေလက်သွေးပြန်ကြောရောဂါတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါရှိသူတွေမှာလည်း ရောဂါပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလူနာတွေကို တတ်နိုင်ရင် လေအေးပေးစက်ကို အရမ်းမအေးအောင်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရာသီဥတု ပူပြင်းချိန်မှာ အိမ်နှင့်…
နုနယ်တဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကင်ဆာရောဂါဆိုးကြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင် မိဘရော ကလေးပါ အလူးအလဲ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးသလို ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း ရောဂါနုစဉ်စောစောသိ စောစောကုသနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေဟာ ကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် (ဖြစ်ဖို့ နည်းပေမယ့်) ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီး မသွားနိုင်ခြင်း၊ ဆီးထဲတွင် သွေးပါနေခြင်း (အယောက် 1000 မှာ3ယောက်ခန့် ကင်ဆာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။) ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဖုအကြိတ်တွေ စမ်းမိခြင်း (အယောက် 1000 မှာ2ယောက်ခန့် ကင်ဆာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။) လည်ပင်း တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အကျိတ်တွေ ရောင်နေခြင်း (အယောက် 1000 မှာ 1 ယောက်ခန့် ကင်ဆာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။) ဆက်တိုက် ခါးနာနေခြင်း (အယောက် 1000 မှာ 1 ယောက်ခန့် ကင်ဆာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။) ဆက်တိုက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခြင်း (အယောက် 1000 မှာ 1 ယောက်ခန့် ကင်ဆာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။) ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ တက်ခြင်း၊ အပြုအမူ၊ အကျင့်စရိုက်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြင်အာရုံ ပြောင်းလဲခြင်း (အယောက် 1000 မှာ 1 ယောက်ခန့်…
• ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ် ဘာစားထားလဲ အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ အချိုရည်၊ အာလူးကြော် အဆာပြေစားစရာတွေဟာ ဗိုက်မ၀ဘဲ ပြန်လည် ဆာလောင်စေ ပါတယ်။ အသား၊ ငါး နဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး ထောပတ်သီး အစေ့အဆံတွေဟာ စွမ်းအင်ပြည့်ဝစေတာမို့ ဗိုက်ပြည့်တဲ့ခံစားချက်ကို ရရှိစေပါတယ်။ • စိတ်ညစ်နေရင် ကော်တီဆုန်းဟော်မုန်း ထွက်တဲ့အတွက် ခဏခဏ ဆာလောင်စေပါတယ်။ စိတ်ညစ်ရင် စားတယ်၊ ပျော်လည်း ပျော်ပျော်ကြီး စားကြမယ်။ စိတ်ကောက်လည်း စားမယ်။ ချော့ရင်လည်း မုန့်နဲ့ ချော့ရမယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆုံနေလည်း စားဖြစ်ကြမယ်။ စိတ်အနေအထား အမျိုးမျိုးကြောင့် စားဖို့ ရွေးချယ်သွားကြသူများလည်း မရှားပါဘူး။ • တစ်ခါတလေ ရေဆာတာနဲ့ ဗိုက်ဆာတာကို မကွဲပြားကြပါဘူး။ သင့်ကိုယ်က ရေဓာတ် လိုအပ်နေတာကို ဗိုက်ဆာနေတယ်ထင်ပြီး စားတတ်တာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ • အချိုတွေ တနင့်တပိုး စားပြီးရင် ဗိုက် ပြန်ဆာတယ်ဆိုတာ အင်ဆူလင်ထွက်ပြီး သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို ချပစ်လိုက်လို့ပါ။ သွေးချို ကျသွားတာနဲ့ ဆာတာ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ • ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လာရင် မကြာခဏ ဆာပါတယ်။ ဆီးချို ထိုးကျလာရင်လည်း ဆာတတ်ပါတယ်။ စွမ်းအင် လိုအပ်နေတာကို ပြသတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • ကိုယ်ဝန်ရှိခါစမှာ အတော်များများက မစားချင်မ၊ သောက်ချင်လောက်အောင် နေမကောင်း၊ ထိုင်မသာ ဖြစ်ကြပေမယ့် ဗိုက် ခဏခဏဆာပြီး…
၁ – မတ်မတ်ထိုင်ပါ ခါးကို မတ်မတ်ထိုင်ခြင်းက ကြွက်သားတွေကို ပိုသုံးရပြီး ကယ်လိုရီကို ပိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ခြေထောက်ကိုလည်း ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိကပ်ထား သင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ထိုင်တဲ့အခါ သတိထား လုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ ၂ – အသက် ရှုလေ့ကျင့်ခန်း နောက်ကို မမှီပါနဲ့။ လက်ကို ဒူးခေါင်းပေါ်ထားပါ။ ရုံးက ခုံမှာ ဆိုရင်တော့ လက်ကို စားပွဲခုံပေါ် တင်ထားပါ။ ၁ – အဆိုပါအနေအထားတိုင်း လေကို ၁ ကနေ ၄ ထိရေပြီး ရှုသွင်းပါ။ ၂ – လေကို ပြန်မထုတ်ခင် ၁ ကနေ ၈ ထိရေပြီး အောင့်ထားပါ။ ၃ – အဆုတ်ထဲက လေတွေအားလုံးကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ။ ၄ – အလေ့အကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက် ဖြည်းဖြည်းရှုသွင်းသင့်ပါတယ်။ ၁ ကနေ ၈ လောက်ထိရေပြီး ရှုသွင်းသင့်ပါတယ်။ ၅ – ရှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမတ်မတ်ထားပါ။ Credit Photos & Source – Lifehack